13/03/2018 - Page 3 sur 5 -
Lalàm-pifidianana : Efa eo am-pelatanan’ny asam-baomiera
Niditra tamin’ny fivoriana tsy ara-potoana faharoa ny eny anivon’ny Antenimieram-pirenena. Araka ny efa fantatra, dia ny fandaniana ny lalàm-pifidianana no antom-pisian’ny fivoriana. Raha ny voalaza, dia volavolan-dalàna miisa 12 no hodinihina sy hoentina laniana mandritra …Tohiny
Manjakandriana : Adin’ny mpivady niafara tamin’ny tsindron’antsy
Nitrangana adina mpivady indray tany amin’ny fokontany Fanarenana Andranovelona ny sabotsy tolakandro lasa teo. Namoa-doza indray araka izany ny disadisa sy fifamaliana teo amin’ireto mpivady. Maty voafiran’ny antsy mihitsy ilay raim-pianakaviana vokatry ny fifandonana tamin’izany. …Tohiny
Andohalo : Vehivavy roa nangalatra môtô
Tsy ny lehilahy irery ihany amin’izao fotoana no mangalatra fa ny vehivavy ihany koa dia efa maro izy ireo no voasambotra amin’ny resaka harom-paosy, fisolokiana avo lenta, firaisana tsikombakomba amin’ny fikambanan-jiolahy. Anisan’izany ihany koa ity …Tohiny
Hiarahan’ireo andrarezin’ny sarimihetsika malagasy. Vokatra voalohan’ny Tatatata Production, ny « Melok’ela », horonantsarimihetsika ahitana ny fifankatiavan’ny zandary sy ny dahalo. Horonantsary mitantara ny fifandraisan’ny fianakaviana roa, ka ny fianakaviana voalohany manana zanaka vavy, ary zandary no asany. …Tohiny